By administrator on	 September 19, 2020 कोरोना अपडेट, देश, फोटो फिचर, स्थानीय, स्वास्थ्य/जीवनशैली/यौन
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप १ हजार २०४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शनिबार आयोजना गरेको नियमित कोभिड–१९ प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप १ हजार २०४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो । यो सँगै नेपालमा हाल कोरोना संक्रमितको कूल संख्या ६२ हजार ७९७ पुगेको छ । मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा सबै भन्दा बढी काठमाडौंमा ५७० जना संक्रमित थपिएका छन् । त्यस्तै, चितवनमा नयाँ ७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । अन्य जिल्लाहरूमा मोरङमा ३३, सुनसरीमा २३, भक्तपुरमा ८३, ललितपुरमा ५८ र मकवानपुरमा १८ जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बारामा १११, सप्तरीमा १९ र नवलपुरमा ४५ जना संक्रमित थपिएका छन् ।
देशमा हालसम्म पुष्टि भएका कूल संक्रमितमध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या भने १७ हजार १२९ रहेको छ । सक्रिय संक्रमितमध्ये ९ हजार १५३ जना संस्थागत आइसोलेसनमा बसेका छन् भने बाँकी ७ हजार ९७६ जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमणबाट मुक्त भई १ हजार ४४७ जना घर फर्किएका छन् । सो सँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या भने ४५ हजार २६७ पुगेको छ । यो कूल संक्रमितको करिब ७२ प्रतिशत हो ।
यस्तै, पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ११ जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन् । थपिएको संख्यासँगै नेपालमा कूल मृतकको संख्या ४०१ पुगेको छ । १२ दिनको अवधिमा १०० जनाको ज्यान गएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. गौतमका अनुसार हाल देशभर ३५ जनाको भेण्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ भने १७९ जनाले सघन उपचार कक्षमा उपचार गराइरहेका छन् ।